jaaliyadda Seattle Washington ee Maraykan ka oo lacag ugu Deeqay Ururka Badbado. | ururka badbaado
Published on January 25, 2015 by Badbaado Nairobi Keyna · 2 Comments
Waayahan danbe ururka badbaado ayaa xiriiro dhaw la samaynayay jaaliyadaha dibadda ee beesha si ay gacan uuga geestaan dadaalada lagu doonayo in wax looga qabto waxbarasha iyo caafimaadka degmooyinka Jowlo iyo Xarardheere.
Xiriirkaan jaaliyada ohio ee waqooyiga America ayaa ahaa mid bilaw u ah xiriiro kale uu ururka ku doonayo in uu la sameeyo Gobolada kale ee America.
Wakiilka rasmiga ah ee ururka badbaado Saciido Maxamuud Warsame Xayaysi ayaa aad u soo dhawaysay waqabadka ururka iyadoo uugu baaqday jaaliyadaha kale in ay ku soo biiraan ololaha wax looga qabanaayo hurumarka deegaanada beesha oo ay hurmuudka u tahay Ururka Badbaado.
Jaaliyadda Seattle Washington ayaa bishaan ugu deeqay lacago oo ay iska soo uruuriyeen,lacagtaa oo ay gaarayso 800$(sided boqol oo dollar), sidoo kalane waxa ay balan qadeen in bil waliba ay jaaliyadu lacago ku bixin doonto si horay loogu socdo dhanka horumarka beesha Saruur.
Sidoo kale ururka waxa uu uga Mahadcelinaya xiriirka cusub Caaqil Cali Nuur Cagwayne iyo Engineer Xuseen Weheliye Shiikhow.
Waxaan u Mahad celinayaa jaaliyadda Ohio ee waqooyiga America sida walaaltinimada leh oo ay uga soo jawaabeen codsigii Ururka Badbaado. Waxaan ka rajaynayaa Jaaliyadaha kale ee caalamka in ay iyaguna sidaas oo kale uga soo jawaabaan baaqa iyo codsiga Ururka. Gacmo wadajir ayay wax ku gooyaan. Mahadsanidiin.
abdirahman waranto says:
Aad beey umahadsanyihiin walaaha reer ohio, iyo dhamaan jaaliyadaha aduunka ee ururka badbaado, walaalayaal aanu gacmaha isqabsano oo aan kordhidho howlaha socday insh weeynu kagungaareeynaa higsigeena, ruux walba oo ururka ku abtirsado hamuujiyo dadaal uu kaga qeeybqaadankaro taba rucaadaha ururka maadaama ururku inaga wax inoo qabanayo.